Archives voasary - SmartMe
Tagamila tag: volomboasary
Dom » Entries tagged with "orange"
ONT any Orange - miasa ho ahy ihany ny Internet!
manana, voasary, ny router
Natokana ho an'i Grzesiek an'ny HejDom ity lahatsoratra ity. Izy no voalohany nanome fanazavana momba ny zavatra toy ny ONT any Orange, izay nahatonga ahy hanoratra an'ity torolàlana ity ho anao tamim-pitsikiana lehibe. Fa ireto misy roa ...
# hello5G - 1G any Orange manomboka ny 5 Jolay
Ny 5G dia miditra haingana any Polonina. Tambajotra finday iray hafa no hanolotra 5G amin'ireo mpanjifany. Manjary Orange, ary ho afaka hampiasana azy izahay manomboka amin'ny 1 Jolay. Hisy mpijery 5 tapitrisa mandritra ny tamba-jotra 6G ...
Toetran'ny fandrahonana Epidemika - Mijanona ao an-trano dia jereo ny fomba anampian'ny orinasa any Polonina manampy anay
17 Martsa 2020
inport, Coronavirus, voasary, milalao, Delicious.pl
Ny Coronavirus dia lohahevitra laharana voalohany, fantatsika rehetra izany. Minitra vitsy lasa izay dia nanambara ny praiminisitra vonjy maika ny praiminisitra. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hihaona aminay ireo mpandraharaha (ary tsy izy ihany). Hamarino izay atolotry ny ...
Manatsara ny hafainganam-pandeha sy ny Internet ny 1 metro metro
14 Martsa 2020
Manana vaovao tsara ho an'ny mpamaky izahay avy any Warsaw. Raha mpanjifan'ny Orange na Nju Mobile ianao, manomboka izao dia ho afaka hamaky SmartMe ianao ary hijery ny sarimihetsika misy anay tsy misy olana;) Nihatsara be i Orange ...
Manomboka hetsika lehibe i Orange - Andao hanampy amin'ny gigabytes
fanentanana asa soa, voasary
Ny Internet any Poland dia tena mora. Tadidiko foana fa rehefa mandeha any ivelany isika dia tsy afaka manamarina hoe ohatrinona ny vidiny iray amin'ny gigabyte amin'ny Internet. Midika izany fa be dia be ny an'ny jig ato amin'ny famandrihana. Ary ...